Power က CD ကို + G Burner2Code ကိုသော့ဖွင့် - အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် Serial - Softkelo - Unlimited ဆော့ဖ်ဝဲများရှာပါ, ဒါကိုတော့ & hack
နေအိမ် » ပရီမီယံ Cracked » Power က CD ကို + G Burner2Code ကိုသော့ဖွင့် – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် Serial
Power က CD ကို + G Burner2Code ကိုသော့ဖွင့် – အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် Serial
အားဖြင့် softkelo | စက်တင်ဘာလ 26, 2017
Power က CD ကို + G Burner2Code ကိုသော့ဖွင့် ပရီမီယံဗားရှင်းကိုသက်ဝင်အသုံးပြုသည်. ဒီဆော့ဗ်ဝဲဟာပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့်အစွမ်းထက် CD ကို + G disc ကိုမီးလောင်ရာဖြစ်ပါတယ်နှင့် software အမြန်ပေးပို့ခြင်း.
သင်တစ်ဦးကာရာအိုကေ disc ကိုမီးမရှို့ဖို့ကြိုးစားနေနေတယ်ဆိုရင်, သို့သော်, သငျသညျအသုံးပြုသူထံမှနိမ့်ဆုံးကြိုးပမ်းမှုနှင့်အတူတပြင်လုံးကိုအများကြီးလုပ်ဖို့ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုလျောက်ပတ်သောအပိုင်းအစရှာဖွေတွေ့ရှိလို့မရပါဘူး, ဒီနေရာမှာတစ်ဦးဖြစ်နိုင်သမျှအဖြေမယ့်: စွမ်းအင် cd + g ကို burner.
ပါဝါကို CD + G Burner Download2Code ကိုသော့ဖွင့်
Power က CD ကို + G Burner2Code ကိုသော့ဖွင့်
Power က DVD ကို, G Burner လွယ်ကူသော cd + g ကိုကာရာအိုကေ disc ကိုမီးလောင်ရာထက် သာ. ကြီးမြတ်တင်ဆက်, ဒါကြောင့်လည်းအမြန်ပေးပို့ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းပါရှိသည်အဖြစ် tools.In သင် installation ကိုကျော်လွန်ရနောက်ဆုံးတွင်စနစ်တကျ-စည်းရုံး interface ကိုဖြည့်ဆည်းကိစ္စတွင်, သငျသညျစွမ်းအင် cd + g ကို burner program ကိုသုံးစွဲဖို့တော်တော်လေးလွယ်ကူကြောင်းထွက်တွေ့လိမ့်မည်, အဓိကအားဖြင့်လမ်းအလိုလိုသိ options.If နှင့်အတူအလုံးစုံစင်ကြယ်သောကြည့်ရန်သင့်အားအကောင်းဆုံးမီးလောင်ရာ tool ကိုရှာကြသည် download, Power က CD ကို, G Burner2Code ကိုသော့ဖွင့်.
သငျသညျဒါ့အပြင်လိုနိုင်ပါစေ: Tweakbit Speedtest Optimizer
သငျသညျဤအရပ်ရှို့နိုင်ပါတယ်, ငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်စေသော်ဝ်, မျိုးပွားခြင်းနှင့် Converter ဖိုင်တွေ, setting များကို၎င်း၏အလွန်ကိုယ်ပိုင်ရာခိုင်နှုန်းသာဝါကြွားခြင်းရှိသမျှတစ်ခုတည်း tab ကို.
သငျသညျဘင်အပုဒ်သို့မဟုတ် cdg / mp3, စာရွက်စာတမ်းများကိုမီးရှို့ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့လျှင်, စနစ်အများကြီးတစ်ခုတည်းသောပျမ်းမျှမီးလောင်ရာကိရိယာ၏ပိုင်ဆိုင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏, ဤသူသည်သင်တို့ဖိုင်များကိုထွက်ကောက်ချင်သည်ဟုဆိုလိုသည်, installation ကိုပု burner tool ကို, အရှိန်အဟုန် configure and သောသူအပေါင်းတို့ဖြစ်ပါသည်. အခမဲ့ Download ပါဝါကို cd&ဆ burner .
အမြန်ပေးပို့ခြင်း, သို့သော်, တစ်အတုံးအပို configuration ကိုမျက်နှာပြင်ပါဝငျ, သင် output ကို format ကို configure လုပ်ဖို့ precipitated နေအဖြစ် (ကျီငယ်, ဇစ်, cdg + mp3, သို့မဟုတ် cdg + WAV), ဖတ်နေလျင်နှင့် output ကိုဖိုင်အမည်မျက်နှာဖုံးများ.Power က CD ကို, G Burner2Keygen မီးလောင် disk.Download များအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ် Power က CD ကို + G Burner2Keygen ယနေ့တွင်.
အဆိုပါတန်းတူကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများအဖြစ်ကောင်းစွာပြောင်းလဲခြင်း utility ကိုကထောက်ပံ့, အဓိကခြားနားချက်ကျူးလွန်ဘစ်နှုန်းဖို့လမ်းချိန်ညှိစေခြင်းငှါ၎င်းအားလပ်ရက်အစက်အပြောက်ပုံစံဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, စတီရီယို mode ကို, နှင့်သာယာသော options များ.
ခွန်အား Power က CD ကို + G Burner ယေဘုယျအားဖြင့်သာအနည်းငယ်မိနစ်အပေါင်းတို့၌ဖျောပွတာဝန်များကိုကစားနှင့်ပရိုဂရမ်အားလုံးအိမ်မှာပြတင်းပေါက်ဗားရှင်းအပေါ်အပြစ်ကင်းစင်စွာအလုပ်ဖြစ်တယ်, အထွေထွေခြုံငုံစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်နိမ့်ဆုံးခြေရာနှင့်အတူ.Power က CDG Burner softkelo မှာအခမဲ့ရရှိနိုင်.
အဆုံးသတ်အဖြစ်, Power က CD ကို + G Burner2Keygen တစ်ဦးအမြန်လမ်းအတွက်ယင်း၏ရည်ရွယ်ချက်တာဝန်ထမ်းဆောင်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီရရှိနိုင်ပါအင်္ဂါရပ်များအတွက်အများအပြားစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာရရှိပေမယ့်. သင်တို့အဘို့အရှာနေလျှင် Power က CD ကို + G Burner2serial သင်မှန်ရာအရပျမှာ.
ဘန်း BIN, CDG, မှာ KMA, mcg, MP3, + G, နှင့်ဇီပ်လုပ်ထား MP3, + G ဖိုင်တွေ.
BIN အဖြစ် CD ကို + G disc ကိုသီချင်းအပုဒ်ကယ်တင်, MP3, + G, ဇစ်ဖိုင်အဖြစ်က MP3 + G, နှင့် WAV + G ဖိုင်တွေ.
တစ်ခုတည်း mouse ကိုကလစ်နှိပ်နှင့်အတူမိတ္တူ CD ကို + G discs တွေကို.
ထုံးစံစုစည်း CD ကို + G discs တွေကိုဖန်တီးပေး.
မီးလောင်သောရှေ့တော်၌ထိုသီချင်း key ကိုပြောင်းလဲပါ. (သီးသန့် Feature ကို)
တစ်ဦး FreeDB အွန်လိုင်းဒေတာဘေ့စသုံးပြီးအများအပြား discs တွေကိုများအတွက်သီချင်းနှင့်အဆိုရှင်အမည်များကို retrieve.
ပုံနှိပ်ပါ CD ကိုအမှု Built-in တံဆိပ်ပရင်တာနှင့်အတူတံဆိပ်များ.
BIN အကြားပြောင်း, မှာ KMA, mcg, MP3, + G, နှင့်ဇစ်ဖိုင် Format.
အတူအလုပ်လုပ်တယ် အများဆုံး ခေတ်သစ် CD ကိုနှင့် DVD ကို burners တွေက. (burner MMC-သဟဇာတနှင့်ထောက်ခံမှု Dao / 96 mode ကိုသူဖြစ်ရမည်).
Power က CD ကို + G Burner Windows OS အောက်တွင်ပြုလုပ်အလုပ်လုပ်တယ် 2000, XP ကို, Vista က, 7, 8, နှင့် 10 (32 နှင့် 64 bit ဗားရှင်း)
← Tweakbit Speedtest Optimizer Crack – လိုင်စင် Key ကို + Keygen အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် Sound Forge Pro ကို 11 ရိုက်သံ →